Tsono koki yemutengo inowedzera muna Chikunguru, pasi pemvura graphite electrode yakakwira ne20%.
Sezvo mutengo wesimbi urikuramba uchikwira, mutengo wekuputika choto simbi inogadzira icharamba ichikwira, uye mutengo wemubhadharo wemagetsi svutugadzike yesimbi uchishandisa simbi yakasarudzika sezvo mbishi ichiratidzwa. Kukosha kwanhasi: Mutengo we UHP600 muIndia graphite electrode musika ...
Sekureva kwemishumo yazvino kubva mhiri kwemakungwa, mutengo we UHP600 mumusika we graphite electrode muIndia unokwira kubva pamakumi maviri nemakumi mapfumbamwe emazana rupees / ton (3,980 US dollars / ton) kusvika 340,000 rupees / ton (4670 US dollars / ton). Nguva yekuurayiwa iri kubva muna Chikunguru kusvika Nyamavhuvhu 21. Saizvozvo, mutengo weHP4 ...
Kuwedzera kwemitengo uye kukwana kukwana purofiti, graphite electrode mitengo ichiri kutarisirwa kukwira.
Kuongorora kwemusika: Graphite electrode yemusika mitengo yakaramba yakagadzikana svondo rino. Vhiki rino, mutengo wepasi-sarufa petroleum coke, iyo yekumusoro yakatsvuka zvinhu zve graphite electrode, yakamira kudonha uye yakagadzikana. Izvo zvakashata zvinokanganisa pane yakatsvuka zvinhu pamusoro pe graphite electrode yakaneta, uye t ...
Iyo graphite electrode musika inochengetedza yakatsiga kumusoro kumusoro maitiro.
Kunyangwe iyo graphite electrode musika yanga iri mumwedzi mitanhatu zvichikwira kutenderera, izvozvi main graphite electrode makambani achiri muchimiro chekuputsa nekuda kwekukwira kwezvinhu zvezvinhu zvakasvibirira. Panguva iyi, mutengo kumanikidzwa ari graphite electrode musika kwakakurumbira, uye mutengo iwe ...
Tsono koki yemutengo inowedzera muna Chikunguru, pasi ...